CABIN FEVER na Ilay Lalitra Mamolava - Takila Malagasy
CABIN FEVER na Ilay Lalitra Mamolava (Soanja Estelle)
Mpanoratra: Soanja Estelle
Nitsidika : 243
Tantaram-piainana tamin'ny Tapany Andrefan'i Etazonia tamin'ny andron'ny Hazakazaky ny Filana Volamena. Nitranga tao Colorado ny tantara. Tantara marina.
Ny atao hoe “ Cabin fever” dia aretin-tsaina azon’ny olombelona iray raha mijanona ela loatra ao anaty trano hazo mitoka-monina izy mandritra ny ririnina aty Amerika Avaratra. Misoko miadana io aretina ary mitarika fahitana hafahafa. Ny mampalahelo dia betsaka amin’ireo lehilahy tia tendrombohitra ka mitoka-monina any dia voan’io matetika satria tsy te hifandrairay amin’olona no betsaka no te hanankarena tampoka satria amin’ireny tendrombohitra sy lohasaha ireny no misy ny volamena sy ny vatosoa miafina ka izay mahavita mangady no mety ahita.
Izay no nitranga tamin’ity lahiantitra iray antsoina hoe Clint. Izy ihany no nanorina ny Cabin -nany tany amin’izany Tendrombohitra antsoina hoe Sneffles. Natsangany teo ampotrin’ ny vavan’ilay Mine-ny mihitsy io tranokeliny io mba ho afaka angady volamena foana izy na dia ao anaty ati – ririnina aza hono. Nijaliany mihitsy ny nanamboarany an’io tranokeliny io satria natotony tao daholo ny ainy iray manontolo, tsy nitandrony hasasarana. Fatana kely vita amin’ny vy no fandrahoany sakafo tsotsotra amin’ny vilany vy; toy ny tsaramaso, ampemba sy izay biby matiny amin’ny basiny. Misy latabatra kely izay vita amin’ny hazo matevina tao an-dakoziany. Tsy lavitra ny rindrin-kazo no misy ny kidorony izay vita amin’ny hodin-tsoavaly feno volo. Eo ihany koa dia misy seza hazo roa mba fiankinany. Tsy dia hoe manahoana akory io tranokely cabin io fa saingy afa-po tanteraka izy. Nisy rangahy iray antsoina hoe Mr Jones nipetraka sahabo ho eo 3 kilometatra ny toerana nanorenany io fonenany io. Fa na izany aza dia tsy mba mihaona mihitsy izy roalahy ireo raha tsy indraindray tadiavina. Hany ka raha tena mba mila namana mafy I Clint dia lasa izy mitsoriaka midina mandeha ski mamonjy ny toeram-pivarotana ampoto-tendrombohitra ery ambany ery, izay hany tanana akaiky azy indrindra.
Tonga aloha ny Ririnina tamin’i taona 1870 satria Oktobra dia efa feno ranomandry miavovona, tsy mirava ny tendrombohitra ary midongona foana izany mandra- volana Jiona. Ny tapaky ny Septembra anefa dia efa mba maniry namana sahady izy fa mafy loatra ilay irery.
Nivaly izany vavaka izany indray maraina Kristmasy satria nisy Lalitra niditra tao an-tranony. Nitsiry tao an-tsaina avy hatrany fa afaka hataony ho namany io lalitra, raha vitany ny manao izay mahatamana azy ao an-trano, sady hihira ny hira Krisimasy ho azy ny fimonomonon’ ilay lalitra eran’ny trano hono. Naka Siramamy izy, nataony tao anaty kopy misy rano kely ary napetrany teo ambon’ ilay latabatra hazo tao an-dakozia. Nomeny anarana hoe “ Fred” ilay lalitra. Eo ampototry ny Labozia mirehitra dia mba niara nisakafo izy roa ary nankafy ny sakafo Kristmasy, narahana fisotroana divay izay namboariny tamin’ny ravinkazon’ny ala. Tsy nampino fa lasa mpinamana ny Olombelona sy ny Lalitra ary nahagaga izany finamanana izany. Vitan’i Clint ny mitsoka sodina ary indro tokoa ilay lalitra fa mitsinjatsinjaka eny… faly. Nampianarin’i Clint an’i Fred ny milalao “Chess” na echecs. Tia Whisky be koa I Fred fa mahagaga dia izy indray mahazaka lavitra noho I Clint, izay matetika mitolefika ao ambany latabatra. Ao an-tsain’i Clint dia io lalitra io no namany tsy foiny indrindra ambonin’ny tany ary izay ataony dia ifampizarany amin’io daholo. Indraindray izy miresaka nofy hoe niara-manjono izy ireo eny amin’ny dobo tsy lavitra loatra, na hoe mandeha hihaza satria izay no zavatra mahafinaritra an’i Clint.
Indray andro anefa dia nivadika ny tantara. Fa nisy nandondona tao ambaravarany. Akory ny hagagany fa I Mr Jones no tazany tao. Nahazo karazana ski vaovao ity farany ka mba manandrana mandehandeha hono izy. Hafaliana moa ny an’i Clint nahita azy. Nampandrosoany hipetrapetraka teo an-dakozia ilay rangahy mba hiara-hisotrosotro kafe sy hitafatafa. Tsy henohenon’i Clint nandalondalo niserana I Fred nandritra izay fotoana izay satria mihevitra izy fa mbola mamo I Fred lalitra satria nisotro zareo ny alina. Nivadika filalaovana Chess ny fihaon’ireto mpiara-monina ka raikitra ny tabataba, izay nanaitra an’i Fred tao anaty torimaso. Ka indro izy mba nihodikondina nitady ny kopin-tsiramaminy no sady mba te haka fy izay mitranga ao an-dakozia koa. Tamin’ny voalohany dia tsy nahatsikaritra azy ity lahiantitra ray fa nanohy izay nataony. Fa rehefa nandeha teny ny lalao dia nandresy I Clint ka mba te hankalaza izany I Fred dia nanidintsidina nanodidina ity namany tsy foiny. Tezitra tamin’ny naharesy azy anefa I Mr Jones ka nony nahatazana ilay lalitra izy dia avy hatrany dia norarafany tamin’ny tanany ka potsitra tery ilay lalitra ary maty tsy tra-drano.… Tsy nahafehy ny fihetsem-pony I Clint, satria io no namany iray dia iray eto ambonin’ny tany ka avy hatrany dia nandray ny basiny izy ary nitifitra avy hatrany ity vahiny sambany mba namangy azy. Tsy tana koa ny ain’ity farany. Teo vao tonga saina I Clint nahita ity vahiny nihapatra nitsirara tamin’ny tany.
Ny ampitso marainan’ io ihany dia lasa izy naka ny ski -ny dia nidina faingana tany an-tanana mba hibaboka ny helony no nampandre ny olona tao an-tanana.
Fa rehefa naheno izay nanjo azy ny Fitsarana dia nitomany fatratra ny Jury enin-dahy nihaino teo, fa mafy tokoa anie izany irery sy tsy mana-namana ao anaty ririnina izany. Tsy nanameloka azy izy ireo, afa tsy hoe mahazo Kapoka amin’ny tanana izy dia izay. Nisy nanome Alika azy ny olona satria ontsa azy loatra fa saingy nolaviny, fa iny lalitra iny ihany no ilainy.
Taona maro taty aoriana dia ny vata mangatsiakan’ I Clint no sendra hitan’olona sendra nandalo nivaingana tao anaty ranomandry teo akaiky ny trano fonenany. Nalevina tao amin’ny tananan’i Ouray, Colorado ; mifanakaiky tamin’ ilay namany Mr Jones izy. Fa ny fahatsiarovana azy dia mbola mirakitra aty Colorado ihany any an-tendrombohitra any satria nitaraina mafy mantsy izy hoe tiany loatra ilay lalitra eny fa na dia mamolava aza.